Haweeneyda Carmalada Cad ee xiriirka la leh Alshabaab oo la beeniyey inay ku sugan tahay Britain. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Haweeneyda Carmalada Cad ee xiriirka la leh Alshabaab oo la beeniyey inay ku sugan tahay Britain.
Afhayeenad u hadashay Boliska Britain ayaa sheegtay inaysan waxba ka jirin wararkii horey loogu sheegay inay Haweeneyda Samantha Lewthwaite ee lagu naananyso Carmalada Cad si dhuumaalaysi ah ku soo gashay Britain, laguna arkay hotel ku yaalla magaalladda Darlington.
Boliska waxay sheegeen in baaritaan kadib ogaadeen inaysan Samantha Lewthwaite ahayn Haweeneydii bishii hore ee December 26-dii lagu arkay Hotel uu leeyahay Jilaa British ah.
Samantha Lewthwaite oo ah hooyo 32 jir afar carruur leh waxaa aad u baadigoobaya Hay’adda Boliska Caalamiga ee INTERPOL, iyadoo lagu eedeynayo inay ka tirsan tahay Xarakadda Alshabaab iyo inay ku lug leedahay dilkii in ka badan 400 oo qof oo ay ku jiraan 148-kii Arday ee lagu dilay Jamaacadda Garissa bishii April ee sannadkii hore.
Sarkaal ka tirsan Sirdoonka Somalia ayaa horey u sheegay inay Haweeneydaasi u dhalatay dalka Britain tahay Gacanta Midig ee Hoggaamiyaha Alshabaab, Axmed Cumar ee Arrimaha Hawlgalladda.
Si kastaba ha ahaatee, Sirdoonka Reer Galbeedka waxay ku guuleysan la’ yihiin inay ogaadaan halka ay Samantha Lewthwaite dhab ahaan ku sugan tahay, waxayna marar badan sheegeen inay ku sugan tahay K/Galbeed Somalia, mar kale Yemen iyo ugu dambeyntii oo ay sheegeen inay Tababare u tahay Haweenka ka tirsan Daacish ee ku sugan gudaha dalka Syria.
Somali lala xiriirinayo Alshabaab, kuna xiran Maraykanka oo la soo maxkamadeynayo.
Madaxweynaha oo weli ku sugan Jowhar iyo Shirkii Maamul-u-samaynta oo galay maalintii 2-aad.